संस्कृत हिँडेको बाटो- विविधा - कान्तिपुर समाचार
मिश्र संयुक्त राज्य अमेरिकास्थित लुइस विश्वविद्यालयमा अंग्रेजीको विभागाध्यक्ष हुन् । प्रकाशित : पुस २१, २०७५ ०७:५९
कार्तिक २५, २०७५ प्रमोद मिश्र
काठमाडौँ — कात्तिक ८ गते राति सिकागो (अमेरिका) मा सुत्नै लाग्दा मेरो मोबाइल फोन बज्यो । विराटनगरमा जाग्राम बसेकी मेरी श्रीमती डाँको छाडेर रुन थालिन् । किन रोएको भनेर अलि झर्किएँ तर फेरि आमाहरूलाई त केही भएन भनेर आत्तिएँ । ससुरालीमा ९१ र ८२ वर्षीया दुई जना सासूआमा हुनुहुन्छ ।
९४ वर्षीया फुपूसासू विराटनगरमा बितेको खबर श्रीमतीले फोनमा दिँदा म दिउँसो अफिसमा थिएँ । ‘फुपू जानुभो’ भन्ने खबरले एकछिन भावविह्वल भएपछि थामिँदै भनेको थिएँ, ‘राम्रै भयो, शारीरिक पीडाबाट मुक्त हुनुभो ।’ जाने बेला उच्छ्वासले ‘राधाकृष्ण’ भनेर प्राण त्याग गर्नुभएछ । कुनै पाप गर्नुभएको रहेछ भने पनि लोक भनाइअनुसार प्राण त्याग्ने बेलाको भगवद् नामोच्चारणले सिधै स्वर्ग जानुहोला भन्ने मनमा भयो तर अहिले यस्तो जोडको रोदन किन भनेर श्रीमतीलाई सोधेँ ।
‘फुपूको किरिया विराटनगरमा गर्न नदिने भए । विराटनगरमै आउनुस् भन्दा नि मान्दैनन् र पहाडको आफ्नै घरमा किरिया बस्छौं भन्छन्,’ उनले भनिन् । मैले कारण सोधेँ । फुपूको घरपट्टिका मानिस काठमाडौंमा र पहाडमा बस्छन् । उनीहरूले आफैं किरिया गर्ने भनेछन् । ‘पण्डित र यहाँ भेला भएको समाजले पनि घरपट्टिकाले त्यसो भनेपछि माइतीको केही चल्दैन, दुई ठाउँमा भाँडो राख्न मिल्दैन भन्छन्,’ श्रीमतीले सुनाइन् । मलाई अलि विस्मय भयो ।
फुपूको जीवन आम नारीको जस्तो भएको भए यो ठिकै हुन्थ्यो । साधारणतया हिन्दु परम्परा र शास्त्रानुसार स्त्रीको विवाहपश्चात् घर, थर र कर्मथलो आफ्नो वैवाहिक घर हुन्छ, अर्थात् पतिको घर । माइतीको वंश र आश्रय त्यागिन्छ अनि पतिको वंश र कुल आफ्नो हुन्छ । हिन्दु समाज पितृसत्तात्मक हो ।
फुपूको विवाह नौ–दस वर्षको उमेरमा ८५ वर्षअघि पूर्वी पहाडको एक कुलीन क्षत्री परिवारमा भएको थियो तर सासूको कहरले बिहेलगत्तै फुपू माइत फर्किनुभयो । त्यसपछि एकाध खेपबाहेक न पति न तिनको परिवारले सोधखोज गरेका थिए । फुपू स्वयंले पनि पतिसँग जाने वा सोधखोज गर्ने वास्ता राख्नुभएन । लोग्ने मर्दा तिनका परिवारले फुपूलाई खबरसम्म गरेनन् । यसलाई अस्वाभाविक पनि मानिएन ।
गर्भेटुहुरी भएकीले होला, तीन वर्ष जेठा दाजुसँगै आँटिली आमाको मायाकै न्यानोमा हुर्किन फुपू माइत फर्कनुभयो । माइतमै कुलीन झर्रा क्षत्री परिवारको बन्धन–अनुशासनमा बसी जवानीका वसन्त र वृद्धावस्थाका बर्खा र हिँउद काट्नुभयो । जिन्दगीभरि दाजु लीलाभक्तको प्रगतिलाईआफ्नो प्रगति र उनको परिवारलाईआफ्नो परिवार ठान्नुभयो । दाजुकै छोराछोरीलाई ज्युज्यान गरी हुर्काउनु, बढाउनुभयो । तीन दशकअघि दाजुको देहान्त भयो ।
दाजुले दिएको जग्गा नागरिकता नभएकाले फुपूका नाममा पास हुन सकेन । एक जना भदाले सीडीओ अफिसमा बेहोरा भन्ने क्रममा फुपूको सानैमा बिहे भएको खुस्काएछन् । त्यसपछि सीडीओले केको नागरिकता दिन्थ्यो † पतिले सनाखत नगरी हुँदैन भन्यो । कहिले कसका नाममा, कहिले कसका नाममा राख्ने क्रममा जग्गा हिनामिना भयो । कालान्तरमा माछामासु छाड्नुभयो र कृष्णमार्गी वैष्णव भई दीक्षा लिनुभयो । फुपूलाई कसैसँग कुनै माग वा गुनासो रहेन । पछिल्लो समय फुपूलाई हाड मक्किने (आस्टियोपरोसिस) रोगले भेटेको थियो ।
श्रीमतीले ‘मलाई साथ दिने कोही छैन’ भनिन् । सालोलाई फोनमा सोधेँ । उनले पनि ‘हाम्रो केही चल्दैन, भिनाजु । तीन जना पण्डित आँगनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि त्यसै भन्नुहुन्छ’ भने । ‘पण्डितजीसँग कुरा गरौं एक फेर, के भन्दारैछन्,’ मैले भनेँ । ‘तुलसा मैयाँबाहेक सबै जना घरपट्टिकाले किरिया गर्न चाहे पाउँछन्’ भन्ने लोकविचार पण्डितले सुनाए ।
‘तर शास्त्रले के भन्छ, पण्डितजी ?’ मैले सोधेँ ।‘शास्त्रअनुसार घरपट्टिकाले चाहे उनीहरूले गर्न पाउँछन्,’ पण्डितले निष्कर्ष सुनाए ।‘विराटनगर आउन पनि नमान्ने, मुखाग्नि पनि नदिने अनि किरिया गर्ने अधिकार तिनीहरूलाई कसरी हुन्छ ?’ मैले तर्क गरेँ ।
‘त्यो त ठिकै हो तर एक जनाबाहेक कोही त्यसो भन्दैनन्, के गर्ने ?’ भनेर पण्डित फोनबाट हटे । सालाले पनि स्वर ठूलो पारे र दिदीलाई चुप लाग्न आदेश दिए, ‘अमेरिकाबाट आएर अन्तिम बेला फुपूको सेवा गर्न पाउनुभो, अरू के चाहियो ? छाड्नुस् यी सब लफडा ।’
दसैंको षष्ठीका दिन विराटनगर पुग्दा फुपूलाई अर्धबेहोसी अवस्थामा भेट्यौं । सालाले न भरपर्दो स्वास्थ्यकर्मी भेटिराखेका थिए न फुपूको सरसफाइ गर्ने दक्ष महिला वा पुरुष । ओछ्यानमा सुतेको सुतेकैले गर्दा दुवैपट्टि बेडसोर (ओछ्यान घाउ) भइसकेको थियो ।
फुपूको असह्य पीडालाई घटाउन सकिन्छ कि भनेर लगत्तै म अस्पतालतर्फ सिटी रिक्सामा दौडिएँ । जान त एक दिन सबैलाई छ तर जीवनका अन्तिम दिनहरूमा कष्ट र पीडा हुनु हुन्न भन्ने मेरो मान्यता छ । अस्पतालमा जेरियाट्रिक (वृद्धावस्थासम्बन्धी चिकित्सा) को डाक्टर नपाइने रहेछ । घरमा गएर नर्सले इलाज गर्ने व्यवस्था पनि रहेनछ ।
फुपूको असह्य कष्ट कम गर्न सकिन्छ कि भनेर डाक्टरलाई सोध्दा तिनले सादा कागजमा दुई थरी गोली लेखिदिए । त्यही घोलेर खुवाउँदा फुपूलाई केही अथवा भयो । भोलिपल्ट सरसफाइका बाबजुद घाउबाट गन्ध आउन थाल्यो । ड्रेसिङ गर्ने मानिस ल्याउन सिटी रिक्सामा खुर्र शिक्षण अस्पताल कुदेँ ।
फूलपातीका दिन एमर्जेन्सीबाहेक सबै बन्द । बिन्तीभाउ गरेपछि एक जना राय थरका स्वास्थ्यकर्मी घर जान तयार भए । त्यस दिन र भोलिपल्ट राम्रो ड्रेसिङ गरिदिए । पर्सिपल्टदेखि न आए न फोन उठाए ।
मेरी फुपूसासूबारे यति बेलीविस्तार लाउन आवश्यक थिएन । सम्भ्रान्त क्षत्री परिवारकी एक वयोवृद्ध चेलीको सामाजिक, कर्मकाण्डी, कानुनी र जीवनका अन्तिम दिनहरूको अवस्था अहिले पनि यस्तो हुँदोरहेछ भन्ने बुझाउन चित्रण गरेको हुँ । उनको यस्तो स्थिति भयो भने साधनविहीन अरू नारीको के अवस्था हुँदो हो !
मोरङ नेपालका विकसित जिल्लामा पर्छ । विराटनगर काठमाडांैपछिको ठूलो मात्र होइन, सबैभन्दा जागरुक, सचेत र धेरै मन्त्री, प्रधानमन्त्री उत्पादन गरेको सहर हो । त्यहाँ स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक न्याय र धार्मिक रूढिको अवस्था यस्तो छ भने देशका अविकसित, पिछडिएका गाउँठाउँमा कस्तो होला ? र, पञ्चायती आधुनिक सामन्तवाद, बहुदलीय प्रजातन्त्र र सामाजिक अनि आर्थिक अधिकारका लागि लडिएको दसवर्षे माओवादी ‘जनयुद्ध’ पछिको गणतन्त्रमा पनि महिलाको पुरुष निरपेक्ष कानुनी अधिकार स्थापित हुन सकेको छैन ।
पाँच दिनपछि टीका आशीर्वाद थापी श्रीमतीलाई फुपूको स्याहारको मोर्चा सम्हाल्न छाडेर म सिकागो फर्कें । त्यसको तीन दिनमै फुपूले आफ्नो कष्टकारी काया त्याग्नुभयो । भोलिपल्ट सालालाई फोन गरेँ । ‘चतरा जाने मान्छे हुँदैनन् भनेको त लोग्नेमान्छे, स्वास्नीमान्छे सबै गए । दिदी पनि मलामी जानुभो,’ उनले सुनाए, ‘आफ्नो श्राद्ध फुपूले उहिल्यै पण्डित बोलाएर गराइसक्नुभएको थाहा पाएपछि दिदी शान्त हुनुभो ।’
जीवन छँदै श्राद्ध गरेको मलाई थाहा थिएन ।
‘फुपू त एकैछिनमा खरानी हुनुभो । सजिलै गरी जानुभो । बाँच्ता पनि कसैलाई दु:ख दिनुभएन, मर्दा पनि त्यस्तै । दसैं सिद्धिएपछि र तिहार सुरु हुनुअघि कुनै बाधा अड्चन नगराउने गरी जानुभो,’ सालाको बोलीमा सन्तोष र शान्ति थियो ।
‘धर्मात्मा हुनुहुँदोरहेछ । स्वर्गमा पनि कसैसँग केही माग नगरी, कसैलाई दु:ख नदिई बस्नुहुनेछ भन्ने मलाई पक्का विश्वास छ,’ मैले भनेँ अनि मनमनै भनेँ, ‘अरू फुपूहरूको जीवन सजिलो बनाउन यस लोकमा भने हाम्रो न्याय र अधिकारको माग कम हुनु हुँदैन ।’
प्रकाशित : कार्तिक २५, २०७५ ०८:२८